Dalxiisayaasha iyo dadka deggan waa inay muujiyaan caddaynta imtixaanka vax/negative si ay u galaan meheradaha Oahu
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Wararka Jabinta Hawaii » Dalxiisayaasha iyo dadka deggan waa inay muujiyaan caddaynta imtixaanka vax/negative si ay u galaan meheradaha Oahu
Jebinta Wararka Caalamka • kariska • Wararka Jabinta Hawaii • HITA • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Kamaainas • News • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Caddayn ayaa loo baahan yahay si loo galo makhaayadaha, baararka, iyo inbadan
Duqa Magaalada Honolulu Rick Blangiardi ayaa ku dhawaaqay maanta, Isniinta, Ogosto 30, 2021, in laga bilaabo Sebtember 13, 2021, dhammaan macaamiisha doonaya inay galaan qaar ka mid ah xarumaha Oahu waxay u baahan doonaan inay soo bandhigaan caddeyn tallaal ama caddeyn tijaabo COVID-19 ah oo taban 48kii la soo dhaafay saacado.
Amarkan degdegga ah ee cusub ee Helitaanka Ammaan ee Oahu wuxuu jawaab u yahay kororka socda ee kiisaska cusub ee COVID-19 ee soo ifbaxay markii ay yimaadeen kala duwanaanshaha Delta.
Tirooyinkaan kiisaska ah ee sii kordhaya ayaa baahi weyn u qaba isbitaalada Hawaii iyo shaqaalaha.
Waxaa ku jira caddaynta tallaalka ama natiijooyinka baaritaanka taban, shaqaalaha ganacsiyadan waa inay sidoo kale muujiyaan kaarkooda vax ama natiijooyinka baaritaanka.
Tani amar degdeg ah oo cusub wuxuu sii jiri doonaa ugu yaraan 60 maalmood. Gobolka iyo degmadu waxay kaloo dejiyeen waajibaadka tallaalka shaqaalaha. Carruurta ka yar 12, ee aan u -qalmin tallaallada, waa laga dhaafay shuruudaha.
Ganacsiyada soo socda ayaa ku socda amarkan cusub:
Makhaayadaha iyo baararka (ka -qaadistu waa ka reeban tahay) - khamrigu wuxuu joojin doonaa in la siiyo 10 -ka fiidnimo
Goobaha jimicsiga iyo jirdhiska, oo ay ku jiraan istuudiyaha dheesha
Luuqyada Bowling, arcades, iyo hoolalka bilyaarrada
Qaybaha gudaha ee jardiinooyinka botanical
Aquariums, soojiidashada nolosha badda
Doonida madadaalada ganacsiga
Barkadaha ganacsiga ee dadweynaha iyo kuwa gaarka loo leeyahay
Soojiidashada kale ee ganacsi sida go kart, golf yar
Xarumo kasta oo bixiya cunto iyo/ama cabitaan loogu talagalay isticmaalka goobta
Caddeynta la aqbali karo ee tallaalka
Caddaynta tallaalka buuxa macnaheedu waa muujinta inaad dhammaystirtay nidaam tallaal oo ay oggolaatay Waaxda Caafimaadka Hawaii iyadoo la raacayo dhammaan shuruudaha barnaamijka Safarada Badbaadada ee Gobolka iyada oo la siinayo:
nuqul adag oo ah kaarka tallaalka ee gobolku ansixiyey;
sawir/nuqul dijitaal ah ee kaarka tallaalka ee gobolku oggolaaday; ama
codsi qalab dijital/caqli leh oo ay oggolaatay gobolka Hawaii oo xaqiijinaya xaaladda tallaalka oo buuxa (oo ay ku jirto barnaamijka/codsiga Safarada Nabdoon).
Waa inaad sidoo kale keentaa aqoonsi la mid ah caddaynta tallaalka.
“Tallaal buuxa” waxaa loola jeedaa 2 toddobaad ayaa ka soo wareegay qiyaastii labaad ee taxanaha tallaalka COVID-19 oo ah laba-qiyaasood kaas oo loo oggolaaday adeegsiga degdegga ah ama uu oggolaaday Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka ee Mareykanka. Haddii kale, 2 toddobaad waa inay dhaaftay ka dib markii hal-tallaal COVID-19 ah kaas oo loo oggolaaday adeegsiga degdegga ah ama uu oggolaaday Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka ee Mareykanka, iyadoo aan loo eegin haddii la siiyay tallaalka COVID-19.
haddii shaqsi diido inuu muujiyo caddaynta tallaalka ama caddaynta tijaabada COVID-19 ee taban ee xarun laga yaabo inuusan gelin marka laga reebo ujeeddooyin aad u degdeg ah oo xaddidan (sida isticmaalka musqusha, qaadashada cuntada, bixinta biilka, ama beddelidda qolka labiska). Markaad u soo gasho goob ujeeddooyin xaddidan, shaqsiyaadka waa inay xirtaan maaskaro wejiga.
Duqa magaalada Honolulu Rick Blangiardi ayaa sheegay in meheradaha uu daboolay barnaamijka Safe Access Oahu laga filayo inay dhaqan geliyaan xeerarka cusub. Kuwa aan wajihi karin ganaaxyo ama xitaa xiritaan ku meel gaar ah. Makhaayadaha Oahu iyo xarumo kale ayaa sidoo kale ku sii jiri doona xayiraadaha awoodda hadda jira sidoo kale waxay xusuusnaan u tahay dalxiisayaasha safarka Hawaii.